Madaxweyne Yuusuf oo dhawaan ka amba baxaya Addis Abababa iyo dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo isku diidan howlaha dib u heshiisiinta ee uu wado ra'isul wasaare Nuur Cadde. Ruunkinet 15/02/08
Wararka ka imaanaya magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Col. Cabdullahi Yuusuf oo dhawaan ka ambabixi doono magaalada Addis Ababa.
Warar kala duwan ayaa ka imaanaya safarka madaweynaha ayadoo ay dadka qaar leeyihiin waxaa uu madaxweynaha ku hormarayaa Puntaland in kastoo ay jiraan qaar kale oo dhahaya wuxuu si toos ah u aadayaa magaalada Baydhabo.
Dhanka kale, waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay dowladda Mareykanka iyo Midowga Yurub ay isku khilaafsan yihiin dadaalka uu wado ra'isul wasaare Nuur Cadde oo uu ku doonayo dib u heshiisiin dhab ah oo dhex marta dowladda iyo mucaaraddka ka soo horjeeda.
Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in ay qabto fikradda madaxweyne Yuusuf iyo qaar ka tirsan maamulkiisa kuwaasi oo aaminsan in xoog wax lagu maquuniyo inta laga adkaanaya mucaaradka ayadoo dhinaca dowladaha Yurubna ay doonayaa in la taageero talada Col. Nuur Cadde oo ah in wada hadal wax lagu dhameeyo.
Ra'isul wasaare Nuur Cadde ayaa la sheegay in uu madaxweynaha kala tashaday dib u heshiisiinta uu wado si loo tijaabiyo in ay shaqeyn karto.